पावर असिस्ट बाइक भनेको के हो? | ebike Shuangye
घर ब्लग समाचार पावर असिस्ट बाइक भनेको के हो?
पावर असिस्ट बाइक भनेको के हो?
A शक्ति सहयोगी बाइक वा इलेक्ट्रिक बाइक, राइडरलाई मद्दत गर्न एक इलेक्ट्रिक मोटर संग पेडल चक्र हो। संलग्न इलेक्ट्रिक मोटरले सहयोग प्रदान गर्न सक्छ र प्याडलहरू प्रोपल्सनको मुख्य माध्यम हुन सक्छ। यदि तपाईं अधिक समय बचत गर्न चाहानुहुन्छ भने केही पावर असिस्टेड बाइकले पनि थम्ब इनस्टल गर्‍यो, शुद्ध इलेक्ट्रिक राइडिंग यात्राको मजा लिन केवल स्विच वा थि्रटल थिच्नुहोस्।
प्याडल सहयोग के हो?
प्याडल सहायता पावर असिस्ट बाइकको लागि सामान्य हो, पूरै ई-बाइकको अत्यावश्यक अंश पनि। प्याडल सहायता पावर सहायक बाइकको अपरेटिंग मोडमध्ये एक हो जुन तपाईंलाई प्याडलमा मद्दत गर्न ई-बाइक मोटर खोल्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। धेरै जसो ई-बाइकहरूमा प्याडल-सहायक सुविधा यसमा निर्मित छ जुन तपाइँले मोड़ वा थम्बट थ्रोटलको सट्टामा प्याडलिंग गरेर मोटरलाई सक्रिय पार्न अनुमति दिन्छ। फाइदा सरल छ। तपाईको इ-बाइक मोटर सक्रिय गर्नका लागि घुमाउने वा थि्रटल थिच्नुको सट्टा, केवल पेडिलिंग सुरू गर्नुहोस् र मोटर स्वत: पावर आउँनेछ। सामान्यतया, गति सेन्सर वा टोक़ सेन्सर पावर असिस्ट बाइकको तल्लो कोष्ठमा स्थापित गरिएको थियो - धुरा वा शाफ्ट जसले दुई प्याडललाई जोड्दछ र घुमाउन अनुमति दिन्छ। ई-बाइक डिस्प्लेमा सेटिं्गले मोटरले तपाईंलाई सहयोग गर्न कति शक्ति प्रयोग गर्दछ निर्धारित गर्दछ।
स्पीड सेन्सर VS टोक़ सेंसर
सरलता र पूर्वानुमानिता गति रिडर सेन्सर पेडल सहायता को लाभ हो। जब तपाईं प्याडिaling शुरू गर्नुहुन्छ, मोटरले शक्ति पाउनेछ, र तपाईं प्याडलिंग गर्दा कति मोटर शक्ति तपाईंलाई सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, Shuangye इलेक्ट्रिक बाइक छ6पेडल असिस्ट स्तर, देखि0देखि5स्तर। जब तपाइँ पेडल गर्नुहुन्छ, तपाइँ महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाइँ सवारीमा कुनै शक्ति थप्नुहुन्न - मोटरले सबै काम गर्दैछ। यदि तपाइँ लेग पावरमा योगदान दिन र व्यायाम प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाई बटनको माध्यमबाट तपाईको इ-बाइकको डिस्प्लेमा प्याडल सहायता स्तर कम गर्न सक्नुहुन्छ।
टोक़ सेन्सरहरू ग्यारेन्टी गर्दछ तपाईको ई-बाइकमा शारीरिक व्यायाम। टोक़ सेन्सरले मात्र मोटरलाई सक्रिय गर्दछ जब सम्म तपाईं प्याडलहरूमा दबाब दिनुहुन्छ। मोटरको समान शक्ति आउटपुट १: १ पावरलको गति अनुसार ई-बाइकमा रूपान्तरण हुनेछ। त्यसोभए, तपाईले शक्ति को स्तर मापन गर्न को लागी कति व्यायाम गर्न को लागी प्याडलिंग बाट प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ।
पावर असिस्टेड बाइक र मोटरसाइकल बीच भिन्नता
एक पावर असिस्टेड बाइक राइडरलाई मद्दत गर्न एक इलेक्ट्रिक मोटर संग जोडिएको बाइक हो। पहिलो हेराईमा पेडल सहितको केही मोटरसाइकल पावर असिस्टेड बाइकसँग एकदम मिल्दो देखिन्छ। तर धेरै जसो मोटरसाइकल पेडल स्थापना गर्दैन। वास्तवमा, पावर असिस्ट बाइक र मोटरसाइकलको केहि पक्षहरुमा धेरै भिन्नता हुन्छ, जस्तै गति, पेडल क्र्याक स्पेसिing, वजन, सीट स्थिति, सीट आकार र गेयरिंग।
यदि दुई पाels्ग्रा सवारी सँग एक समायोज्य सीट र मल्टिप गियरहरू छन् भने यसलाई सजिलो बनाउन पेडल गर्न सजिलो हुन्छ, साथ साथै ब्याट्री प्याक र सवारीलाई मद्दत गर्नको लागि इलेक्ट्रिक मोटर। त्यसो भए, यो एक पावर असिस्टेड बाइक हो।
यदि दुई पा wheel्ग्रा सवारी साधन आन्तरिक दहन मोटर लगाइएको छ वा प्याडलहरू प्रोपल्सनको मुख्य माध्यम छैनन्। यो स्पष्ट छ कि तिनीहरू एक पावर असिस्टेड बाइक छैनन्, तिनीहरूले मोटरसाइकल वा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल कल गर्न सक्दछन्।
यो लेखले तपाईंलाई बताउँछ कि पाद सहायक सहायताको मोटरसाइकल र मोटरसाइकलको पक्षबाट सहयोग बाइक के हो। यदि तपाईं पावर असिस्ट बाइकको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं अघिल्लो लेखहरू ब्राउज गर्न वा हाम्रो भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ आधिकारिक वेबसाइट, हामीलाई तल सन्देश छोड्न पनि सक्दछ।
Tags:पावर असिस्ट साइकल शक्ति सहायता बाइकहरू
अघिल्लो: कसरी एक इलेक्ट्रिक बाइक को ब्याट्री स्वस्थ राख्न
अर्को: लोकप्रिय E ई बाइक बिक्रीका लागि - तपाईंको आवश्यकता पूरा गर्नुहोस्